Ilowday iPad Screen Password Lock - Sidee inuu ka soo kabsado Data ku yaal
[Ilowday iPad Screen Lock Password] Sidee inuu ka soo kabsado Data ku yaal
iPhone / macruufka
1. iPad xirantay
2. Biyaha Waxyeello iPhone
3. iPhone xayiran Recovery Mode
4. iPhone Notes icon baaba'aan
5. Ladnaansho iPhone Xiriirada aan kaabta
Kaabta 6. View Lugood
7. Ladnaansho iPhone Video
8. dhintay iPhone Data Recovery
9. Ladnaansho iPhone Xiriir
10. iMessages in Computer
11. View iPhone SMS on PC
12. Ladnaansho WhatsApp Messages on iPhone
13. Ladnaansho iPhone Data aan kaabta Lugood
Kaabta 14. Helitaanka iCloud
15. Ladnaansho Picture Messages on iPhone
16. Save Picture ka iMessages
Ilowday iPad screen password qufulka!
iPad aan la quful karaa ka dib markii la xiro, sii joogo shaashadda madow !! Ma jiraa wax aan ka qaban karta tan halmaamay password on iPad iyo waxa lagu furo? Waxaan rabaa in aan u badbaadin iyo ma doonayo in aan iska kasta oo macluumaadka ku yaal. Fadlan caawi Your kaalmo la mid aad wax ku oolka doonaa!
Habka keliya ee lagu furo aad iPad la password qufulka ah, oo aan ka ahayn galaya habayn, waa in la soo celiyo aad iPad in goobaha asalka warshad. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan xogta ku saabsan iPad laga tirtirayaa doonaa haddii aad qabtaan warshada dejinta celin. Sidaa darteed, inaad si fiican u dib u lahaa ilaa xogta iPad aad hore marka aad qorshaynayso in ay sameeyaan.
Sidee baad u soo kaban karto, ama gadaal ilaa xogta iPad aad? Waa maxay sababta isku day in aadan Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (dadka isticmaala Windows) ? Labada iyaga u oggolaadaan in aad eegista soo kabsado xogta iPad iyo badbaadin on your computer. Waxaa intaa dheer, waxay kaa caawin karaan inaad hesho macluumaadka aad hore u lumay. Sida macruufka software kabashada xogta ugu horreeya adduunka ee, Labada versions of Wondershare Dr.Fone ee macruufka waa mid amaan ah oo lagu kalsoonaan karo.
Kabsado / data gurmad aad qufulan iPad
Download version DHAGAYSIGA FREE ah ee barnaamijka hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: The version daaqadaha taageertaa dambeeyay Windows 10, oo ka mid ah Mac taageertaa Mavericks.
Tallaabada 1. Orod barnaamijka on your computer
Halkan, aynu qaadan version Windows sida tusaale. Ka dib marka aad ku xiran aad iPad in kombiyuutarka, waxaad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Sawirka aad qufulan iPad xogta ku yaal
Ku hay qalab aad, iyo tubada "Start" button.
Qabo Xukun iyo badhamada Home waqti isku mid ah marka aad riix "Start" button ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
Fur button Power ka dib 10 ilbiriqsi ka soo gudubtay, laakiin sii haysta button Home for anther 15 ilbiriqsi.
Marka aad u sheegay in aad si guul leh ku soo gashay habka, aad sii daayo karaa button Home oo uu bilaabo aad ka baareyso iPad 1.
Wixii kale ee isticmaala iPad sida iPad mini, iPad la isha Display, iwm, si toos ah guji "Start Scan" badhanka si aad baarista iPad ee dhammaan macluumaadka ku yaal.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha & badbaadin xogta iPad on your computer
Scan ka dib, waxaad ku eegaan karo xogta oo dhan on your iPad. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Halkan waa tutorial video ah.
Sida loo xaliyo arrin forgeten password on iPad (furid password iPad)
Ka dib markii ay soo kabsadaan xogta ku saabsan qufulan iPad, waxa la joogaa wakhtigii si ay u furid aad iPad hadda. Tilmaamaha rasmi Apple ee iPad ah in la soo celiyo waa:
Connect iPad ah in aad damisid.
Dooro iPad galeeysid Lugood ah, iyo riix "Summary" tab.
Guji "Hubi Update." Lugood kuu sheegayaa haddii ay jiraan version a cusub ee software iPad ee la heli karo.
Guji "Soo Celinta". Raac tilmaamaha shaashadda si ay u dhammaystiraan geedi socodka soo celin. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waxa aad ku talin doonaa in ay dib u aad iPad. Marka software iPad ah dib loo soo celiyo, waxaad dooran kartaa in la dhiso iPad sida iPad cusub, ama soo celin aad videos, music, xogta app, iyo waxyaabaha kale ee ka gurmad ah.
Fiiro gaar ah: Xitaa inaad keentaa iPad xarunta Apple adeegga, shaqaalaha Apple sidoo kale u baahan tahay in la soo celiyo aad iPad ah ku xiran. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad u baahan tahay inaad masixi wixii dul saaran.
Reading dheeraad ah
Kabsado fariimaha iPhone : hage Tani waxa ay muujinaysaa sida aad u soo ceshano fariimaha qoraalka ah tirtiray ka iPhone siyaabo kala duwan. Ladnaansho photos tirtiray on iPhone : Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo, sida inuu ka soo kabsado photos tirtiray on iPhone siyaabo kala duwan. Ladnaansho iPhone iMessages : Waxaad soo kaban karto xiriir la tirtiro aan gurmad ah oo ku saabsan iPhone leh 3 tallaabo istareexsan.
Sida loo soo celiya iPad ka kaabta iPhone
Sida loo soo celiya iPad ka dib markii jailbreak
iPad Recovery: Ladnaansho Photos Lost, Videos, Xiriirada & Notes ka iPad
iPhone 7 Images: Ma waxa iPhone 7 eekaan kartaa?
Sida loo Download Music on iPhone, iPad iyo iPod taabashada ah ee Free
Talooyinka Mase ka Android inay iPhone
Sida loo Kala iPhone 4 ka iPhone 4s
Dib u celi Xadidaada habayn ku iPhone
Sida loo beddel iPhone 4 Camera / 5 / 4s / 5S / 3GS / 3G Rear
Sida loo badbaadi Notes ka iPhone in Computer ah
> Resource > iPhone > [Ilowday iPad Screen Lock Password] Sidee inuu ka soo kabsado Data ku yaal